Inkukhu - omunye imikhiqizo ethandwa kakhulu inyama ekhishini zonke wekhaya. Inkukhu inyama iphekwe ngokushesha okuningi kunalokho iwundlu, ingulube noma yenkomo, futhi ukunambitheka akusho vuma kubo. Futhi lenqwaba zokupheka ezihlukahlukene ongakhetha ukulungiswa kwalo mkhiqizo muhle. ongakhetha Alone sendlela ungakwazi ukupheka inkukhu e cream sauce, nedlanzana ezimbalwa uyithayiphe. Lesi sihloko Bayokhuluma ezithakazelisa kakhulu babo.
Ukupheka inkukhu ukhilimu omuncu ngendlela elula, kudingeka ezimbili amabele inkukhu (okusekelwe servings ezine), u-anyanisi owodwa omkhulu, nendebe ukhilimu omuncu, u-garlic clove, kanye usawoti kanye izinongo ukunambitha. Inyama kuyadingeka ukuze usike izingcezu ezincane oblong ubude ngamasentimitha amahlanu ukuze ebubanzini nasekujuleni kwazo, ukushuba hhayi okungaphezu kokukodwa isentimitha. Cream Xuba anyanisi oqotshiwe nesweli, unezela nalokho izinongo (kungasetshenziswa njengoba bendabuko abamnyama kanye / noma upelepele obomvu, futhi noma yiziphi izinketho exotic - incike izintandokazi zakho) uhlanganise kahle. Inyama ukusabalala esitsheni wokubhaka, uthele ukhilimu sauce bese uthumela it kuhhavini. Ngaphambi sikhonza, ungakwazi ukuhlobisa isidlo semifino noshizi ogayiwe. Khonza inyama kungaba cishe noma yikuphi dish side.
Inkukhu, iyisitshulu ngo ukhilimu omuncu, kungenziwa yaphenduka wobuciko real Culinary. Ngenxa yalesi sidinga Womabili amabele inkukhu, utamatisi ezine, amakhowe, amagremu ayikhulu namashumi amathathu, eziyikhulu amagremu of ushizi, amagremu ezimbili noma ezintathu ayikhulu ukhilimu omuncu, namafutha amancane zemifino for ukuthosa, izinongo, usawoti kanye namakhambi ukunambitha.
Bahlanza, kancane omisiwe futhi uthathe yizicucu amancane utamatisi futhi kancane Fry kwabo a Skillet esishisayo ngamafutha zemifino. Khona-ke kukho amakhowe oqoshiwe futhi uqhubeke ibila phezu ukushisa low imizuzu eyishumi. Bese wengeza kuya amakhowe notamatisi ukhilimu omuncu, usawoti kanye izinongo bese uqhubeke imizuzu emva kwamaminithi ambalwa ngaphezulu. Ngesikhathi esifanayo esabelana isifuba inkukhu zibe halves ezimbili futhi ngokucophelela Fry elinye pan. Khona-ke uthele inyama nge cream sauce kanye ibila kuze ithenda phezu ukushisa low - imizuzu mayelana nanhlanu kuya amabili. Ngaphambi kokuthi ususe inkukhu cream sauce ne ipuleti, ufafaze yashizi on a indawo grater ushizi kanye namakhambi. I uhlobise esiphelele salolu isidlo yayiyobizwa abilisiwe irayisi noma amazambane.
Ungakwazi ukupheka inkukhu e cream sauce nge utamatisi unama no-anyanisi. Ukuze wenze lokhu, usike inyama zibe yizicucu amancane u hlanganise anyanisi ezintathu oqoshiwe. Laba bobabili izingilazi ukhilimu omuncu engeza isipuni esigcwele utamatisi unama, upelepele obomvu, ikhumini kanye curry, kanye usawoti kanye isipuni ushukela. Ungase futhi ukwengeza kalamula kancane, kodwa lokhu into ozikhethela wena. Ngokuphelele uhlanganise nenyama usoso, uma kunesidingo, engeza usawoti kancane bese unyakaza esitsheni wokubhaka. Desirably, yaba obukhulu odongeni ngezansi futhi sobumba. Cover isidlo ngesivalo bese uthumela it kuhhavini ukuxoxa nabo eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili kanye degrees, ihora nesigamu. Hlola ukuthi inkukhu ibhalwe sauce ukhilimu, u-anyanisi kungenziwa bezama. Uma akabange esaba Crackle futhi babe ethambile, isidlo usulungile. Sithatha out inyama kuhovini lona kuphole kancane bese bekhonza dish side noma amahlamvu isaladi.
Kubalulekile ukukhumbula umthetho eyodwa elula: uma ukupheka inkukhu e cream sauce, ungesabi ukuthi bavumela ukubuswa nemicabango yabo futhi izame kancane ekhishini. Mpango umkhiqizo like yenkukhu, kunzima, futhi ngeke kuhlangene cishe wonke okuqukethwe efrijini lakho. Ngaphezu kwalokho, ukuthembela umuzwa onawo, uyokwazi ukwakha wobuciko esiyingqayizivele Culinary ukuthi uyojabulisa bonke bangani bakho.
Ukuguqula: Indlela ukuguqula mp3 ukuze WAV kanye noHezekeli